တစ်စစီကျိုးပဲ့နေတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုသီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အေးချမ်းမေ နဲ့ မေတ္တာမျှနေကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အရိပ်အမြွက် ပြောပြလိုက်တဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း – Cele Oscar
တစ်စစီကျိုးပဲ့နေတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုသီဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အေးချမ်းမေ နဲ့ မေတ္တာမျှနေကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အရိပ်အမြွက် ပြောပြလိုက်တဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ၊ အဆိုတျော ဇှဲနိုငျဝငျး ကိုတော့ အားလုံးသိကွ မှာပါနျော။ သူကတော့ အခုထိ အိမျထောငျ မပွုသေးဘဲ လူပြိုကွီးဘဝနဲ့ နထေိုငျနတောပါနျော။ အရငျကလောကျ ရုပျရှငျ ဇာတျကား မြားတှငျ မပါဝငျကွတော့ ပမေယျ့လညျး ပရိသတျမြားက အားပေးနကွေဆဲပါနျော။
သူကတော့ တဈစစီကြိုးပဲ့နတေယျ သီခငျြး ကို သီဆို ခဲ့တဲ့ အဆိုတျော အေးခမျြးမေ နဲ့ မတ်ေတာမြှနေ တာပါနျော။ ဒီအကွောငျးကိုတော့ လူသိရှငျကွား ထုတျဖျောပွောကွားခွငျးတော့ မရှိ သေးသျောလညျး တဈခြို့ ပရိသတျတှေ ကတော့ သိနကွေပါပွီနျော။
အေးခမျြးမဟော အခု လကျရှိမှာတော့ ပွညျပ နိုငျငံတှငျ နထေိုငျနတောပါနျော။ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ ခဈြသူ နှဈဦးဟာ long distance relationship ဖွဈနတောပါနျော။ အေးခမျြးမေ ကတော့ ဇှဲနိုငျဝငျး ရဲ့ မှေးနေ့ ကိုတောငျ အဝေးကနေ လကျဆောငျလေးတှေ လှမျးပို့ရငျး ရိုနကွေတာပါနျော။ မမနဲ့မောငျလေးရဲ့ အခဈြဇာတျလမျး ကို မသိလိုကျ မရှိရလအေောငျ ဝမြှေပေး လိုကျပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ၊ အဆိုတော် ဇွဲနိုင်ဝင်း ကိုတော့ အားလုံးသိကြ မှာပါနော်။ သူကတော့ အခုထိ အိမ်ထောင် မပြုသေးဘဲ လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ နေထိုင်နေတာပါနော်။ အရင်ကလောက် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား များတွင် မပါဝင်ကြတော့ ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်များက အားပေးနေကြဆဲပါနော်။
သူကတော့ တစ်စစီကျိုးပဲ့နေတယ် သီချင်း ကို သီဆို ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် အေးချမ်းမေ နဲ့ မေတ္တာမျှနေ တာပါနော်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းတော့ မရှိ သေးသော်လည်း တစ်ချို့ ပရိသတ်တွေ ကတော့ သိနေကြပါပြီနော်။
အေးချမ်းမေဟာ အခု လက်ရှိမှာတော့ ပြည်ပ နိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေတာပါနော်။ဒါ့ကြောင့် သူတို့ ချစ်သူ နှစ်ဦးဟာ long distance relationship ဖြစ်နေတာပါနော်။ အေးချမ်းမေ ကတော့ ဇွဲနိုင်ဝင်း ရဲ့ မွေးနေ့ ကိုတောင် အဝေးကနေ လက်ဆောင်လေးတွေ လှမ်းပို့ရင်း ရိုနေကြတာပါနော်။ မမနဲ့မောင်လေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း ကို မသိလိုက် မရှိရလေအောင် ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
အလုပ် နဲ့ သက်သေ ပြသ တော့မည့် အဆိုတော် ဟန်ထူးလွှင်